Ezi zezona zinikezelo zibalaseleyo kwi "Countdown" yeAmazon Black Friday | Iindaba zeGajethi
Ezi zezona zinikezelo zibalaseleyo kwi «Countdown» yeAmazon Black Friday
Sele sijikeleze ikona ukusuka ngoLwesihlanu oMnyama, iAmazon ihlala iqala ukufudumeza iinjini, yiyo loo nto Namhlanje sikuzisa umdibaniso onomdla wokuba zeziphi ezona zibonelelo zibalaseleyo uzilungiselele iAmazon kwi ukubala ukuya ngolwesihlanu omnyama esele iqalile kwaye iya kuhlala kude kube ngu-Novemba 19, xa Izibane zeFleshi ukusuka eAmazon ngaphambi kwentengiso enkulu yangoLwesihlanu oMnyama. Sukuphoswa yiyo.
13 / 11 I-16GB yakwaSony Walkman ene-Hi-Res yeaudio ye-139 euros.
14 / 11 Ikhamera yePanasonic Lumix DMC-TZ100EG yee-euro ezingama-469.
15 / 11 I-Oral-B Pro 4000 Smart Series ibhrashi yamazinyo yombane yee-euro ezingama-81 kuphela
Ivenkile yeKrisimesi ifika kwiAmazon
Ukusukela nge-31 ka-Okthobha, ungaqala ukulungiselela iKrisimesi. KwiAmazon.com, siyazi ukuba ezi holide zinokuba noxinzelelo, njengokulungiselela iimenyu zeKrisimesi, ukuphatha izinto zokuhombisa ezinzima, imigca emide yokuthenga nokusonga izipho, okanye umsebenzi onzima wokufumana iinkcukacha ezigqibeleleyo zabathandekayo bakho. Ngesi sizathu, iAmazon.com iphehlelela Ivenkile yeKrisimesi, indawo onokuthenga kuyo kamnandi kwaye naphi na ngonqakrazo olunye nje lwento yonke oyifunayo ukonwabela iiholide.
IAmazon namhlanje ibhengeziwe ezakudala imisebenzi engaphezulu kwama-2.700, XNUMX kule Krisimesi kuyo yonke inethiwekhi yaseSpain yamaziko olungiselelo. Kunyaka ophelileyo, ngaphezulu kwe-300 yale misebenzi yaguqulwa yenziwa isigxina kwizikhundla ezisemva kweKrisimesi, kwaye inkampani ilindele ukuqhubeka ngale ndlela kulo nyaka. Ezi zithuba ziyafumaneka kwezi ndawo zilandelayo: San Fernando de Henares, El Prat de Llobregat and Martorelles. Abasebenzi abajoyina iAmazon ngexesha lephulo leKrisimesi baya kujoyina abasebenzi abangaphezulu kwama-900 abasisigxina kumaziko okufezekisa iAmazon kulo lonke elaseSpain. Zonke ziya kunceda ukuqokelela, ukupakisha kunye nokuthumela iiodolo zeKrisimesi zabathengi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ezi zezona zinikezelo zibalaseleyo kwi «Countdown» yeAmazon Black Friday
I-Android 8.1 iya kunciphisa indawo ekuhlalwa kuyo kukusetyenziswa okungasebenziyo
Izibonelelo zoLwesihlanu oMnyama ziza kuqala kuGeekbuying